आफ्नो निद्रा भुलेर, सुतायो जसले हामीलाई “बुवा” | Butwal Dainik
आफ्नो निद्रा भुलेर, सुतायो जसले हामीलाई “बुवा”
“बुवा ” अर्थात बाबा । सन्तानका लागि यो शब्द कति प्रिय र मूल्यवान् छ ? शायद यसलाई शब्दमा व्याख्या गर्न संभव छैन । शब्दकोषमा व्याख्या गर्ने शब्द नभेटेपछि आफै खोजेको छु ।
बुबा केबल एउटा शब्द मात्र होइन, यो सत्य हो अनि यो एउटा शक्ति पनि हो । योसँग हरेक सन्तानको भावना र भरोसा गहिरो रुपमा जोडिएको हुन्छ । सायद त्यसैले बुवा अर्थमै प्रष्ट देखिन्छ बाच्नुजेल बाबाको साथ । ठेस् लाग्दा पनि हामी अइया बाबा भन्छौं, यो शब्द भित्रबाट अनायस निस्किन्छ । मानौं यो एउटा पावर हो, जसबाट हामीलाई गजबको प्रेरणा प्राप्त हुन्छ अनि अगाडि बढ्ने साहस मिल्छ ।
बुबा, बाबा, ड्याडी, पिता, पापा, फादर । हामी अनेक शब्दले उनलाई सम्बोधन गछौं । हरेक सन्तानको पहिलो हिरो हो बुबा । चाहे छोरा होस् वा छोरी सबैका लागि बाबा प्यारो र पुजनीय हुन्छ । उसले आफ्ना सन्तानलाई माया र संरक्षण मात्र होइन, संघर्ष गर्न पनि सिकाउँछ । कति दुःख, पीडा लुकाएर अनि अनेक अपजस र अपमान पनि चुपचाप सहेर उसले सन्तानलाई खुसी बाँड्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ ।
परिवारको सुखको लागि बुबा तिनै हुन जस्ले आफ्नो खुसी परिवारको निम्ति छोडिदिन्छ । बुवा तिनै हुन जस्ले हाम्रो निम्ति अनेक किसिमको जीवन बाँच्छन् । सानो छँदा उनी हाम्रा संरक्षकको रुपमा हुन्छन् । साथीको रुपमा हुन्छन् । जतिबेला हामी तोतो बोली बोल्दै, बामे सर्न थालेका हुन्छौं, यतिबेला बुबा हाम्रो सबैभन्दा मायालु छहारी बन्छन् । उनकै काँधमा चढेर, उनकै काखमा टेकेर, उनकै नाक निमोटेर, उनकै गाला टोकेर हामी आनन्द लिन्छौं , रमाउँछौं ।
संसारमा जन्म लिनु ठूलो कुरा होइन । जन्मेर बाँच्नुको अर्थ के हो ? आफ्ना सन्तानलाई हरेक बुवाले यही सिकाउने प्रयत्न गर्छन् । बाबा आमाको असल साथी मात्र होइन, सृष्टिको पहरेदार पनि हो । हिन्दु ग्रन्थ अनुसार गुरु, माता र पितालाई भगवानको मानव रुप भनिन्छ । बुवा, पिता अनेक शब्द तर एकै रुप हुन् । रक्षक, पालनकर्ता, जन्म र कर्म दिने व्यक्ति र संसार चिनाउने र आफू बलेल अरुलाई प्रकाश छर्ने व्यक्तिलाई बुबाको रुपमा परिभाषित गरिएको हो ।
सायद यो संसारमै बुवा शब्दनै नभएको भए सायद हामी त्यसपछि आर्को शब्द पाहुदैनौ होला । त्यसैले भनिने गरिन्छ आफ्नो निद्रा भुलेर, सुतायो जसले हामीलाई । आफ्नो आँशु थामेर, हसाँयो जसले हामीलाई । चित्त कहिल्यै नदुखाउनु उसको, जसले स्वयम् आमाबुबा बनायो आफुलाई ।